12/07/13 ~ Myanmar Forward
Posted by drmyochit Saturday, December 07, 2013, under နိုင်ငံတကာသတင်းများ | No comments
ဘန်ကောက် ၊ ဒီဇင်ဘာ ၆ ။ ။ ထိုင်းနိုင်ငံလူဝင် မှုကြီးကြပ် ရေးအရာ ရှိတို့က မြန်မာနိုင်ငံမှ ထွက်ပြေး လာသော ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်များကို တရားမဝင်လူ ကုန်ကူးသူများထံ ရောင်းချခဲ့ ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအသစ် တွင် ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြချက်အရ ထိုင်းနိုင်ငံ လူဝင် မှုကြီးကြပ်ရေး၏ ထိန်းသိမ်းရေး စခန်းများမှ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် များကို ပင်လယ်ပြင်တွင် စောင့် ဆိုင်းနေသော တရားမဝင်လူကုန် ကူးသူများထံမှ လွှဲပြောင်းပေး ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်များ အား ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်း တစ် လျှောက် တိတ်တဆိတ်လွှဲပြောင်း ပို့ဆောင်ကာ ထိုင်း၊ မလေးရှား နယ်စပ်အနီးရှိ လုံခြုံရေးတင်း ကျပ်စွာ ချထားသော စခန်းများ တွင် ဓားစာခံများအဖြစ် ထိန်း သိမ်းထား ပြီး ထိန်းသိမ်းထားသူ တို့၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများ က လာရောက်ငွေပေးရွေးမှသာ လွှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ငွေပေးရွေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသူ များကိုမူ တချို့သော သင်္ဘော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ များနှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ သို့ ရောင်းချခဲ့သည်ဟုသိရ သည်။
ထိန်းသိမ်းရေးစခန်းများရှိ ရိုဟင် ဂျာအများအပြား မှာ သေဆုံးခဲ့ ကြောင်း၊ သေဆုံးသူများအနက် တချို့ကို စခန်းလုံခြုံရေးအစောင့် တို့က ပစ်ခတ်သတ်ဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး အများစုမှာ ရေဓာတ်ခန်း ခြောက်သည့်ရောဂါကြောင့် သေ ဆုံးရခြင်းဖြစ်သည်ဟု အသက် ရှင်ကျန်ရစ်သူတို့ က ပြောသည်။
Posted by drmyochit Saturday, December 07, 2013, under နည်းလမ်းများ | No comments
လိုချင်စရာ စမတ်ဖုန်းတွေ အပြိုင်အဆိုင် ထွက်ရှိနေကြတဲ့ ယနေ့ခေတ်ကြီးမှာ သင်လည်း လက်ရှိဖုန်း အဟောင်းလေးကို သုံးစွဲရတာ ကြာလာရင် ဖုန်းအသစ်ကို ပြောင်းကိုင်ချင်မှာ သဘာဝပါပဲ။ ဒီနေရာမှာ အရေးကြီး တဲ့ ကိစ္စတစ်ခုက ထည့်သွင်းစဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ဘာလဲဆိုတော့ မိမိသူငယ်ချင်း၊ မိတ်ဆွေ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊ ဆွေမျိုးတွေရဲ့ ဖုန်းနံပါတ် (Contacts) တွေပါ။
မိမိရဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အလုပ်အကိုင် ကျယ်ပြန့်ရင် ကျယ်ပြန့်သလောက် Contact တွေရာချီ၊ ထောင်ချီအထိ ရှိနိုင်ပါတယ်။ အလုပ်တွေ အရမ်းများလာပြီး Social ကျနေတဲ့ ယနေ့ခေတ်ထဲမှာ သင့်ရဲ့ ဖုန်းမှာလည်း Contact တွေ အနည်းဆုံး ရာဂဏန်းလောက်ထိ ရှိနေပြီ မဟုတ်ပါလား?
စမတ်ဖုန်း အဟောင်းတစ်လုံးကနေ အသစ်ကို ကူးပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင် မိမိရဲ့ SIM-Card, MicroSD Card စတာတွေကို ရွှေ့ပြောင်းရပါတယ်။ အဲဒီလို ရွှေ့ပြောင်းတဲ့ ကဒ်နှစ်ခုထဲက တစ်ခုခုမှာ မိမိရဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကို သိမ်းထားပြီး ဖုန်းအသစ်ကို ရောက်တဲ့အခါ Expand (ဖြန့်ချ) လိုက်ရုံပါပဲ။
ဒါပေမယ့် တစ်ခုရှိတာက SIM-Card ထဲမှာဆိုရင် ဖုန်းနံပါတ် ၂၀၀ ပဲ သိမ်းထားလို့ ရပါတယ်။ ဖုန်းထဲမှာ(သို့မဟုတ်) MicroSD Card မှာ ဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် အကန့်အသတ်မရှိ သိမ်းဆည်းနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့် Contact တွေကို မှတ်သားရွှေ့ပြောင်းဖို့ Memory Card လို့ခေါ်တဲ့ MicroSD Card တစ်ခုတော့ ရှိသင့်ပါတယ်။
ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ ဖုန်းအဟောင်းထဲက “Contacts” ထဲကို ၀င်ပါ။ အဲဒီမှာ Menu ကိုနှိပ်ပြီး Manage Contact > Export To Storage(Backup to SD card) > OK ဆိုရင် သင့်ရဲ့ Contact တွေ အားလုံးကို MicroSD Card ပေါ်မှာ .vcf ဖိုင်တစ်ခုနဲ့ မှတ်သားထားလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မမ်မိုရီကဒ်ကို ဖုန်းအသစ်ထဲ ပြောင်းထည့်ပြီး Contacts ထဲဝင်ကာ Manage Contact> Import from Storage (Restore from SD card) ဆိုရင် သင်ဖုန်းအဟောင်းမှာ မှတ်ခဲ့တဲ့ ရာပေါင်းများစွာသော Contact တွေအားလုံး အမှားအယွင်း မရှိ ဖုန်းအသစ်ထဲကို ရောက်သွားပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မမ်မိုရီကဒ်ထဲမှာတော့ “Contact/00001.vcf” ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးတစ်ခုရှိနေမှာပါ။ အဲဒီဖိုင်လေးထဲမှာ သင့်ရဲ့ Contact တွေအားလုံးကို စုစည်းသိမ်းဆည်း ပေးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by drmyochit Saturday, December 07, 2013, under နည်းပညာ | No comments
သနား Like, ကိုယ်ချင်းစာ Like , Sympathize like ဆိုတဲ့ အရာမျိုးကို Facebook မှာ ရမယ်ဆိုရင် စာဖတ်သူတို့ လိုချင်ပါသလား။ သူက Like Buttom က လက်မထောင်နေတဲ့ လက်ထဲမှာ ပန်းစီးလေးပါဝင် မှာ ဖြစ်ပါ တယ်။
ရည်ရွယ်ချက် ကတော့ ဒီလိုပါ။ မိမိ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းတွေထဲက တစ်ယောက်ဟာ အလုပ်ပြုတ်ကြောင်း၊ သို့မဟုတ် သူနဲ့ သက်ဆိုင်ရာ တစ်ဦး တစ်ယောက်က ကွယ်လွန်လို့ လည်းကောင်း Status update သို့မဟုတ် Post တစ်မျိုးမျိုး တင်တဲ့အခါ အောက်ကနေ Symphathize Like လို့ခေါ်တဲ့ သနားကြင်နာ Like ကို အသုံးပြု နိုင်စေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ယင်း Like ကိုပေးဖို့က Facebook က တင်တဲ့ Post ကိုစက်နဲ့မှတ်ပြီး Symphtize Like buttom ပေးခွင့်မပေးခွင့် ဆုံးဖြတ်မှာလား၊ Post Owner က ဆုံးဖြတ် မှာ လား၊ သို့မဟုတ် လွတ်လွတ်လပ်လပ် အသုံးပြုနိုင်စေမယ့် Feature တစ်ခု လား ဆိုတာ မသိရသေး ပါဘူး။
ဒီအတွက် Facebook က အင်ဂျင်နီယာတို့ အတည်ပြုဆဲသာ ရှိသေးပြီး တရားဝင်တောင် မကြေညာရသေး ပါဘူး။ သို့ပေမယ့် Symphatize Like နဲ့ ပက်သက်တဲ့ အချက်အလက် အချို့ ကိုတော့ Facebook မှ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူအချို့ က ပြောဆိုနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်မို့ Symphathize like buttom ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွင်း မြင်တွေ့ရ ဖွယ် ရှိကြောင်း သိရ ပါတယ်။
Credit to:Smart Pro Journal
Posted by drmyochit Saturday, December 07, 2013, under သတင်းများ |2comments
မြို့ပတ်ရထားအထူးတွဲများပေါ်၌ စုံတွဲအချို့ မဖွယ်မရာပြုလုပ်မှုကို ကြား သိရသော်လည်း တရားဝင်တိုင်ကြားမှု များမရှိသေး ဟု မြန်မာ့မီးရထားမှ ရန် ကုန်တိုင်း လက်ထောက်အထွေထွေမန် နေဂျာ ဦးကျော်ကျော်မျိုးက ပြောသည်။
မြို့ပတ်အထူးတွဲများပေါ်၌ ရထား ရဲ၊ အထူးတွဲ တွဲစောင့်ဝန်ထမ်းနှင့် လက် မှတ်သိမ်းဝန်ထမ်းများပါရှိကြောင်း အထူး တွဲတွင် ဈေးသည်များပါရှိမှု နည်းပါး၍ စုံတွဲများ စီးနင်းမှုများပြားကြောင်း သိရ သည်။
မြို့ပတ်ရထားသည် နံနက် ၄ နာရီ ၄၅ မိနစ်မှ စတင်၍ ထွက်ခွာပြီး ယင်း တွင်လည်း အထူးတွဲပါရှိကြောင်းညပိုင်း တွင် နောက်ဆုံးထွက် ရထားမှာ ၉ နာရီ ၄၅ မိနစ်ဖြစ်ပြီး အထူးတွဲပါရှိသည့် နောက်ဆုံးတွဲမှာ ၉ နာရီ မိနစ်၂ဝ တွင် ဘူတာကြီးမှစတင်ထွက်သည်ဟု မြန်မာ မီးရထားမှ သိရသည်။
အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော၊ အားမာန်တက်ကြွဖွယ်ကောင်းသော သဘာဝ တိုက်ပွဲတစ်ခုကို ဂျာမန်သူ ဓာတ်ပုံဆရာမ မာရီယွန် ဗိုလ်ဘွန်က လက်ရ ရိုက်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မျက်ဝန်းနှစ်စုံက အပြန်အလှန် စူးစူးရဲရဲ စိုက်ကြည့်နေသည်။ ထက်မြေ့နေသည့် လက်သည်းချွန်တို့က ခွန်နှင့်အားနှင့် လွန်းထိုးပြေးလွှားနေသည်။ သွေးစများနှင့် ချွေးရည်တို့က ရွှံ့စက်များနှင့် ရောယှက်ကာ ညစ်ပတ်ပေပွလျှက် ရှိသည်။ နှစ်ကောင်လုံး မောဟိုက်နေပြီ ဖြစ်သည့်တိုင် ကျားကြီးနှစ်ကောင်လုံး မာန်မလျှော့သေး။ အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသော၊ အားမာန်တက်ကြွဖွယ်ကောင်းသော သဘာဝ တိုက်ပွဲတစ်ခုကို ဂျာမန်သူ ဓာတ်ပုံဆရာမ မာရီယွန် ဗိုလ်ဘွန်က လက်ရ ရိုက်ယူနိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ၊ ပရီတိုရီးယားရှိ လွန်ဒိုလိုဇီ ကျားထိန်းသိမ်းရေး ဧရိယာတွင် နယ်မြေလုကြသည့် ကျားကြီးနှစ်ကောင်၏ ဂုဏ်သိက္ခာ တိုက်ပွဲကို မာရီယွန်က ရှားရှားပါးပါး မှတ်တမ်းတင်ခွင့် ရခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ အနာတရများစွာနှင့် မလျှော့တမ်း တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက် (၄၅)မိနစ် အကြာတွင် ကျားကြီးတစ်ကောင်က အသာစီး ရသွားပြီးမှ တိုက်ပွဲပြီးသွားခဲ့သည်။
ကျားတစ်ကောင်က ၎င်း၏ မျိုးနွယ်တူ သတ္တဝါကြီး၏ လည်ပင်းကို လှမ်းကိုက်လိုက်သည့်နောက်တွင်မူ တိုက်ပွဲ၏ အရှုံးအနိုင် အဖြေပေါ်သွားခဲ့သည်။ လည်မြိုကို ခဲထားသည့် ကျားကြီးက ၎င်း၏ပြိုင်ဘက် သေဆုံးပြီ အထင်ဖြင့် လွှတ်ချလိုက်ချိန်တွင် ကျန်တစ်ကောင်က ထွက်ပြေးသွားသဖြင့် နှစ်ကောင်လုံး အသက်မသေခဲ့ချေ။ မာရီယွန်က "ကျွန်မ ဒီဓာတ်ပုံတွေ မရိုက်ခင် တစ်နေ့က အဲဒီနား တစ်ဝိုက်မှာ ကျားထီးနှစ်ကောင် သွားလာနေတာကို မြင်ခဲ့တယ်။ ကျားတွေက ကိုယ့်နယ်မြေ ကိုယ်သတ်မှတ်လေ့ ရှိပါတယ်။ ဒီကြားထဲ ကျားမတစ်ကောင်က အဲဒီကျားနှစ်ကောင်လုံးနဲ့ မိတ်ဖက်ဖြစ်နေတယ်။ ဒီလို အပြန်အလှန် မသတ်ပုတ်ခင် ကတည်းက ကျားထီးနှစ်ကောင်ကြားမှာ အခြေအနေက တော်တော် တင်းမာနေမှန်း ကျွန်မတို့ သဘောပေါက်ထားပါတယ်"ဟုလည်း ရှင်းပြခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ သူမက "နောက်တစ်နေ့ မနက်ကျတော့ ကျားဟိန်းသံတွေ ကြားရတော့တာပဲ။ ကျွန်မတို့ ချက်ချင်းပဲ ဆူညံနေတဲ့ နေရာဆီ ကားမောင်းသွားတယ်။ ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ ကျားနှစ်ကောင် သတ်ကြတာပါပဲ။ မြင်ကွင်းက သွေးအလူးလူးနဲ့ ခြောက်ခြားစရာပါ။ နှစ်ကောင်လုံးက ခက်ခက်ခဲခဲ အသက်ရှူနေရပုံပဲ။ ရာသီဥတုက အရမ်းအေးတယ်လေ။ ပြီးတော့ ရွှံ့ရည်တွေကလည်း စိုနေသေးတယ်။ နောက်ဆုံး ကျားတစ်ကောင်က လည်ပင်းကို အခဲခံလိုက်ရတယ်။ မိနစ်နည်းနည်းကြာတော့မှ ကိုက်ထားတဲ့ကောင်က လွှတ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့က အဲဒီကျား သေပြီထင်နေပေမယ့် ပြန်ထပြီး ထွက်ပြေးသွားတာ တွေ့လိုက်တယ်"ဟုလည်း ပြောကြားခဲ့သည်။
မာရီယွန်က "(၄၅)မိနစ်လောက် ကြာတော့မှ ဘယ်သူနိုင်တယ်ဆိုတာ အဖြေပေါ်လာတာပါ။ ပိုပြီးလည်း အသက်ငယ်၊ ပိုပြီးလည်း အားကောင်းပုံရတဲ့ ကျားက အနိုင်တိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ရမှာက ဒီတိုက်ပွဲမှာ နှစ်ကောင်လုံး အသက်ရှင်ခဲ့တာပါပဲ။ ခုဆို သူတို့ရဲ့ ဒဏ်ရာတွေလည်း ပြန်ကျက်နေပါပြီ။ ဓာတ်ပုံသမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ အံ့မခမ်း ပုံကောင်းတွေကို ရလိုက်တာပါ။ ဒါပေမဲ့ တိရစ္ဆာန်ချစ်သူ တစ်ယောက် အနေနဲ့ ကျပြန်တော့ သူတို့နှစ်ကောင် သတ်ပုတ်နေတာကို မြင်ရတာ တော်တော်ကြီး စိတ်မချမ်းသာစရာ ကောင်းပါတယ်"ဟုလည်း ဖွင့်ဟသွားသည်။
Posted by drmyochit Saturday, December 07, 2013, under ပြည်တွင်းသတင်းများ | No comments
Posted by drmyochit Saturday, December 07, 2013, under မုဒိမ်းမှု | No comments
ကျိုက်လတ်မြို့နယ်၊ အထက် ဆင်ကူး ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကျောင်းချောင်း .ကျေးရွာ တွင် ဦးလေးဝမ်းကွဲ မှ အသက်(၁၆ )နှစ်ရှိ တူမ၀မ်းကွဲ တော်စပ်သူအား သားမယား အဖြစ် အကြိမ်ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ရာ ကာယ ...ကံရှင်မှ ကျေနပ်မှု မရှိသဖြင့် ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး မှူးအား တိုင်ကြားရာ ၎င်းအုပ်ချုပ်ရေးမှူး မှ ပြစ်မှုကျူး လွန်သူ အား အရေးယူခြင်း မရှိသည့်အပြင် အုပ်ချုပ်ရေး မှူး အာဏာ အလွဲသုံးစားလုပ် ခြိမ်းခြောက်၍ အလိုမတူ သူနှင့် ပေါင်းသင်းရန် အဓမ္မစေခိုင်းမှု ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေရဲ့ မြန်မာစာစနစ်မပါဝင်သေးတဲ့ Samsung ဖုန်းတွေနဲ့ ပြည်တွင်းက မြန်မာစာစနစ် (Myanmar Language) မပါဝင်သေးတဲ့ Samsung ဖုန်းတစ်ချို့တွေအတွက် Samsung Zawgyi Enabler လို့ခေါ်တဲ့ Android ဖုန်းဆော့ဝဲလေး တစ်ခုကို Myanmar Mobile App Store (www.myanmarmobileapp.com) မှရေးသားထုတ်လုပ်လိုက်ပါပြီ ။Android 4.2 နှင့်အထက် မြန်မာစာ (Myanmar Language) မပါဝင်သေးသော Samsung ဖုန်းများကို မြန်မာဘာသာစကား Myanmar Zawgyi ထည့်သွင်းပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ဖုန်းတွင်း setting များအားလုံးတွင် မြန်မာဘာသာစကားပါဝင်လာစေမည်ဖြစ်ပါသည်။ Samsung Zawgyi Enabler ကိုအသုံးပြုရန် သင့်ဖုန်းအား root လုပ်ထားရန်လိုအပ်ပါသည်။ Samsung Zawgyi Enabler ကိုအသုံးပြုပြီးပါက ဖုန်းရဲ့ Setting >Language & input ထဲသို့ဝင်၍ Language တွင် Myanmar (Zawgyi) ကိုရွေးချယ်၍ မြန်မာဘာသာစကားဖြင့် ဖုန်းတွင်းစနစ်တစ်ခုလုံးကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရောက်မြန်မာတွေရဲ့ မြန်မာစာစနစ်မပါဝင်သေးတဲ့ Samsung ဖုန်းတွေနဲ့ ပြည်တွင်းက မြန်မာစာစနစ် (Myanmar Language) မပါဝင်သေးတဲ့ Samsung ဖုန်းတွေအတွက်အခု Samsung Zawgyi Enabler ဆော့ဝဲလေးက အတော်လေးလွယ်ကူအဆင်ပြေသွားစေလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ Samsung Zawgyi Enabler ကိုရေးသားဖန်တီးသူကတော့ Myanmar Mobile App Store မှ ကိုသက်နိုင်စိုး (http://www.facebook.com/thetnaing.mmas) ဖြစ်ပါတယ်။ Samsung Zawgyi Enabler v1.0 for Android ကိုအောက်က link များမှာ download ရယူနိုင်ပါတယ်။
Samsung Zawgyi Enabler v1.0 for Android (Link 1)
Samsung Zawgyi Enabler v1.0 for Android (Link 2)
Samsung Zawgyi Enabler v1.0 for Android (Link 3)
လက်ပံတောင်းတောင်ဒေသမြင်ကွင်း။ ဓာတ်ပုံ - အောင်ပြည့်
လက်ပံ တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း နယ်မြေရှိ ဆာလ်ဖျူရစ်အက်စစ် စက်ရုံပတ်ဝန်းကျင်ရှိ ယာမြေများ မှာ မြေဆိပ်သင့်မှုများဖြစ်ပေါ် နေသည်ကို ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်တွေ့ ရှိရကြောင်း စိမ်းလန်းအမိမြေ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး အသင်းမှ ဓာတ် ခွဲခန်း တာဝန်ခံဓာတုဗေဒပညာ ရှင် ဒေါက်တာကျော်ငြိမ်းအေး က ပြောသည်။ အဆိုပါရလဒ်သည် စိမ်းလန်း အမိမြေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဓာတ် ခွဲခန်းနှင့် မြေအသုံးချရေးဦးစီး ဌာနပိုင်ဓာတ်ခွဲခန်းများတွင် စမ်း သပ်တွေ့ရှိ ချက်များဖြစ်ကာ လက်ပံ တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အနီးရှိ လယ်ယာမြေခြောက်ကွက် မှ မြေဆီလွှာများကို စမ်းသပ် ဓာတ်ခွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကာ ဒီဇင်ဘာ ၅ရက်တွင် ယင်းသို့ရလဒ်ထွက်ရှိ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါက်တာကျော်ငြိမ်းအေး က ''အခုတွေ့ရှိချက်က ဆာလ်ဖိတ် ပါဝင်မှုမြင့်မားနေတာကိုတွေ့ရှိ ရပါတယ်။ အခြားနိုက်ထရိုဂျင် တို့၊ ဘာတို့လဲများနေတာတွေ ရှိ ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မြေဆီလွှာအနေ အထားအရလဲ များတာတွေရှိ တတ်ပါတယ်။ တော်တော် များ များကို တွေ့ရှိရတာကတော့ ဆာ လဖိတ်ပါဝင်မှုပါ။ ဆက်ပြီး လေ့ လာမှုတွေလုပ်ပြီး တိုင်းတာမှုတွေ လုပ်ဖို့လဲလိုပါတယ်'' ဟုပြောသည်။ ဆာလ်ဖိတ်ပါဝင်မှု အချိုး အစားအနေဖြင့် မြေဆီလွှာတစ် ကီလိုဂရမ်တွင် မီလီဂရမ် ၅၀ ထက်ပိုမိုပါဝင်နေ ပါက အလွန်မြင့် မားသည်ဟု သတ်မှတ်ထားပြီး ယခု ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်တွေ့ရှိမှုမှာ မီလီဂရမ် ၂၅ဝရှိနေကြောင်း သိ ရသည်။
အဆိုပါအသင်း၏ အုပ် ချုပ်မှု ဒါရိုက်တာဦးဝင်းမျိုးသူက ''ကန့်သတ်ပမာဏထက် ငါးဆ လောက်မြင့်နေတာ ကြောက်ခ မန်းလိလိပါပဲ။ စိုက်ပျိုးမြေတွေ မှာ ဒီလောက်အဆိပ်သင့်မှုတွေ ကိုတွေ့နေရရင် စက်ရုံထဲမှာနေ ထိုင်တဲ့ ရွာသူ၊ ရွာသားတွေမှာ ဘယ် လောက် အန္တရာယ်များမယ်ဆိုတာ တွေးကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုဆန်း စစ်ချက် Health Impact Assess-ment တွေကို ချက်ချင်းဆောင် ရွက်သင့်ပါတယ်'' ဟုပြောသည်။ ယင်းနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဒေသ ခံကိုဇေမောင်က ''ကျွန်တော်တို့ စိုက်ပျိုးရေးက အထွက်တော်တော် ကျသွားတယ်။ ဘယ်လောက် နည်းသွားတယ်ဆိုတာတော့ ပြော ဖို့ခက်တယ်။ အဲဒါကြောင့် အခု ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်တဲ့အဖြေကို စောင့် နေကြပါတယ်'' ဟုပြောသည်။
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေး နီစီမံကိန်းသည် ၂၀၁ဝပြည့်နှစ်မှ စတင်ကာဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဆန္ဒ ပြမှုများကြောင့် အကောင်အ ထည်ဖော်မှုကို ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခဲ့ ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင် တစ်ခုကိုဖွဲ့စည်းကာ စုံစမ်းစစ် ဆေးမှုများပြုလုပ်ပြီး အဆိုပါကော် မရှင်၏ အစီအရင်ခံစာအတိုင်း စာချုပ်ကို ဇူလိုင် ၂၄ ရက်က ပြန် လည်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ယခင်စာချုပ် များတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာ အစီအမံ များ၊ အကျိုးအမြတ်ခွဲဝေမှု၊ သတ္တု တွင်းပြန်လည်အပ်နှံရေးနှင့် သတ္တု တွင်း ပိတ်သိမ်းရေး၊ လူမှုရေးတာ ဝန်ယူမှု CSR လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး တိတိကျကျ ဖော် ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း သိရ သည်။
Posted by drmyochit Saturday, December 07, 2013, under ဆေးပညာအသိဖြင့် | No comments
ဆရာရှင့် ကျမ အခု ရောဂါတခု ခံစားနေရလို့ စိတ်ပူလို့ ဆရာ့ကို မေးတာပါ၊
ရင်ဖွင့်တာပါရှင့်။ ကျမ အသက်က ၃၂ နှစ် ရှိပါပြီ။ အပျိုပါရှင့်။ ကျမ
မနေဘူးပါဘူး။ ချစ်သူရှိတယ် ဆိုတာကလည်း သူက အဝေးမှာပါရှင့်။ ကျမမှာ
ဒါကြောင့် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်လောက်တည်းက ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန္ဒဖြေဖျောက်တဲ့
အကျင့် ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကျမ သွားတိုက်တံ လက်ကိုင်ထူထူနဲ့ဟာမျိုးနဲ့ ၁
နှစ်လောက်ထိ လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်း ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ်ပဲ
လုပ်ပါတယ်။ မလုပ်ရင်လည်း ကျမ တကယ် မနေနိုင်တော့လို့ပါရှင့်။ အမှန်ဆိုရင်တော့
အဲလိုမျိုးကို မလုပ်ချင်ပါဘူး။ အဲလိုလုပ်တာ အပြစ်ရှိလားရှင့်။ အခု
မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးရှင့်။ အဲဒါဆိုလည်း အဲလိုစိတ် ဖြစ်လာတော့လည်း နာပါတယ်ရှင့်။
ဖြစ်တာလည်း ရောဂါလားရှင့်။ နောက်ပြီး ကျမ ရည်းစားနဲ့ အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရင်ကော ကျမ
အဲလိုမျိုးတွေ လုပ်ခဲ့ဖူးတာ ပြောပြရမှာလားရှင့်။ ကျမကို ဖြေကြားပေးပါရှင့်။
ကိုယ့်ဖာသာကိုယ် ဆန္ဒဖြေဖျောက်တဲ့အကျင့် ရှိတယ်ဆိုတာ ပုံမှန်စိတ်ဖြစ်တယ်။
(အော်ဂဇင်မ်) လိင်ဆန္ဒပြည့်ဝမှု ဆိုတာ အခွင့်အရေးတရပ် ဖြစ်တယ်လို့တောင် လက်ကမ်း
ဆယ်ကျော်သက်-ကိုယ်ဝန်ရမှာနဲ့ STDs လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကို ကာကွယ်စေဘို့
တခြားမသင့်တာမျိုး အားကိုးစရာမလိုတဲ့ အစားထိုးနည်းကောင်း ဖြစ်တယ်။
• Masturbation လုပ်တာကြောင့် လိင်ဆက်ဆံရာမှာ Fertility မျိုးပွါးစေရေး
• Female masturbation အမျိုးသမီးတွေ ဖါသာ-အာသာဖြေတာကြောင့် ဗဂျိုင်းနာ၊
ပိုပြီးအဆင်ပြေစေမယ်။ ကလေးမရလို့ သုက်ပိုးကို အပြင်ကနေ ထည့်ပေးနည်း လုပ်အပြီး
• Female masturbation ကြောင့် သားအိမ်ဝက အချွဲကို အက်စစ်ဓါတ်ပိုစေတာမို့
• Mutual masturbation ဆိုတာ နှစ်ဦးသား အပြန်အလှန် လိင်စိတ်ဖြေပေးကြတာ
နှလုံး-သွေးကြောဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းလို့ ယူဆကြတယ်။ သွေးတိုးကို ကျစေတယ်။
• အသုံးပြုတဲ့ ကိရိယာပစ္စည်းကြောင့် ဘေးဖြစ်မှာသတိထားပါ။ ဂျာမနီမှာ တခါက
• ဒီလိုလုပ်တာချည်းနဲ့ အဆုံးသပ်တာရှိသလို တကယ့်လိင်ဆက်ဆံမှုရဲ့
မိန်းမကိုယ်နေရာကို ပွတ်သပ်ခြင်းနဲ့ အထူးသဖြင့် Clitoris
• Clitoral body မ-အစိကိုယ်ရော Shaft အရင်နေရာပါ သုံးနိုင်တယ်။ အများအားဖြင့်
ဆီးကျိတ်ကထွက်တာနဲ့ အလားတူတယ်။ အတွင်းကျကျအထိ လက်ထည့်ရမှာမို့
လက်ချောင်းသုံးတာကြောင့် A-spot ကိုထိစေဘို့ နည်းတယ်။
သူ့လူနာတွေကို (အိုက်စ်ခရင်မ်) ကို နေ့တိုင်း မစားချင်ကြသလို နေသင့်တယ်လို့
အာရုံကြောစနစ်က အကျင့်ရသွားစေမယ်လို့ ပြောတာ ဖြစ်ပါတယ်။
• Vibrator သုံးရင် လိင်အင်္ဂါနေရာမှာ နာတာ-ထုံတာ ဖြစ်မလား သတိထားသင့်တယ်။
ဆရာဝန်တွေကတော့ အဲလို မထင်မြင်သင့်ဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
Solo sex တယောက်ထဲစခန်းသွားတာမို့ ကိုယ့်အဖေါ် ဘယ်လိုနေမလဲ ဆိုတာ
ဒါ့ကြောင့် စိတ်ဖြေလျှော့ပေးဘို ပိုလိုမယ်။ (မာစတာဘေးရှင်း) ကနေ ကူညီနိုင်တယ်။
သရဲခေါ်ပြီး ကစားမိတဲ့ ၉ တန်း ကျောင်းသူလေးများရဲ့ ခြောက်ခြားဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပ်
Posted by drmyochit Saturday, December 07, 2013, under ဗဟုသုတ | No comments
ကျောင်းမှာ ဆရာမတွေ၊ အိမ်မှာ မိဘတွေမသိအောင် သရဲခေါ်တဲ့ ဂိမ်းတို့ ၊ဖျာလိပ်နတ်ခေါ်တာတို့ စူးစမ်းချင်တဲ့ မိန်းကလေးတော်တော်များများ လုပ်ဖူးကြမှာပါ.. ကျွန်မတို့လည်း စမ်းသပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်.. တစ်သက်မှာ မမေ့နိုင်တဲ့ အဖြစ်အပျက်ကလေးက ကျွန်မတို့ ကိုးတန်းနှစ်မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ...
တစ်နေ့မှာ စုံညီပွဲတော်နီးလာလို့ လူရွေးကြတော့ ကတဲ့အဖွဲ့ထဲမှာ ကျွန်မပါသွားပါတယ်.. ရွေးလိုက်တာ အားလုံးမိန်းကလေးတွေချည်းပဲ... ကျွန်မအပါအဝင် အားလုံးပေါင်းဆယ့်တစ်ယောက်... စာမသင်ရဘဲ အကပဲ တိုက်နေတော့ ကျွန်မတို့လည်း ပျော်နေကြတာပေါ့.. ဒါပေမယ့် အရမ်းပင်ပန်းပါတယ်.. ကျွန်မတို့ကို အက တိုက်ဖို့ အတွက် စာမသင်တဲ့ အခန်းတစ်ခန်းပေးထားပါတယ်... တစ်ဖြည်းဖြည်း ဆယ့်တစ်ယောက် လုံးပေါင်းမိပြီး ခင်သွားတယ်..
တစ်ရက် အကတိုက်မယ့် ဆရာမက အဝတ်အစားအတွက် အပြင်သွားတာကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး အားလုံးအတန်းထဲ ပြန်မဝင်ဘဲ တစ်ခုခု ဆော့ကြမယ်လို့စဉ်းစားရင်း စဉ်းစားရင်းနဲ့ပေါ်လာတာ သရဲ ခေါ်ပြီး ဆော့မယ် မေးကြမယ်ပေါ့...
(အဲဒီ ကစားနည်းကိုအောက်မှာ ပုံနဲ့တကွ ဖော်ပြထားပါတယ်.. အလယ် နေရာမှာ ရေသန့်ဗူး အဖုံးလေး ထားပြီး ခေါ်ရပါတယ်.. ပေ့ါတဲ့အရာလေးဆိုရင်လည်း ပါတယ်.. အဲဒီအဖုံးလေးမှာ သုံးယောက်ထက် ပိုလက်ထောက် လို့မရပါဘူး... )
အဲဒါနဲ့ ဘယ်သူခေါ်မလဲပေါ့နော်.. ကြောက်တတ်တယ့်သူလည်းပါတော့ သေချာခေါ်ရဲမှရမှာလေ... အဲဒါနဲ့ ခေါ်နေတုန်း ခေါ်တဲ့အဖုံးလေးကို ထိထားတဲ့လက်က လွှတ်လိုက်ရင် ဝင်လာမယ့် သရဲက စိတ်ဆိုးတတ် တယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်.. အဲဒါနဲ့ ကျွန်မရယ် သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရယ် စ ခေါ်တယ်...
" ဒီအနီးတ၀ိုက်မှာ ရှိတဲ့ ပရလောကသားများ .. ကျွန်မတို့နဲ့ ဆော့ချင်ရင် ဒီအဖုံးလေးရွေ့ပြီး မေးတာလေး တွေဖြေပေးပါ.. "
အဲဒီလို အားလုံးရွတ်ပြီး စ ခေါ်တယ်.. မြန်တယ်.. နှစ်မိနစ်လောက် အကြာမှာပဲ ပုလင်းအဖုံးလေး ရွေ့လာ တယ်... ကိုယ့်လက်က တော့အလိုက်သင့်လေး လိုက်နေရတယ်... ပထမဆုံး ၀င်လာတဲ့သရဲက ယောင်္ကျား လေးလား. .မိန်းကလေး သိချင်တာနဲ့..
" အခုကျွန်မတို့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီးဆော့တာ.. ဘယ်သူလဲ.. မိန်းကလေးလား.. ယောင်္ကျားလေးလား.. " လို့မေး လိုက်တယ်..
GIRL အကွက်ကလေးနဲ့ BOY အကွက်ကလေးပေးထားပါတယ်.. အဲဒီမှာ သူက GIRL ဆိုတဲ့ စာလုံးလေးစီ ဖြည်းဖြည်းချင်း ရွေ့သွားပါတယ်... ဒါနဲ့ ဆက်မေးတယ်... နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲမေးတော့ ခ ကွေး ရယ် ရ ကောက် ရယ် အဲဒီ စာလုံးနှစ်လုံးဆီကို ဖြည်းဖြည်းချငး ရွေ့ သွားတယ်... အဲဒါ " ငါတို့နဲ့ ဆော့ချင်လား.. မဆော့ချင်ဘူးလား... " လို့ မေးတော့ NO ကိုသွားတယ်.. နောက် တစ်ခေါက် ထပ်မေးတော့လည်း NO မှာပဲ ရပ်နေတော့ သူ့ ကိုပြန်လွှတ်ပေးလိုက်တယ်...
အဲဒါနဲ့ နောက်ထပ်တစ်ယောက် ထပ်ခေါ်မယ်ပေါ့... ခုနကလိုပဲ ပြန်ခေါ်တယ်... ဒီတစ်ခါ ဝင်လာတာတော် တော်မြန်တယ်... ခေါ်လို့မှမဆုံးသေးဘူး.. ချက်ချင်းရောက်လာတာ.. ပြီးတော့ ခုနကလို ဖြည်းဖြည်းချင်း အဖုံးက မရွေ့ဘူး... နည်းနည်းမြန်နေတယ်.. ကျွန်မတို့ တစ်ယောက် မျက်နှာ တစ်ယောက် ကြည့် တော့ မျက်နှာတွေ ပျက်နေကြပြီလေ.. အဲဒါနဲ့ နာမည် မေးတယ်.. အင်္ဂလိပ်စာလုံး J ကိုသွားတယ်... မြန်မြန်ပဲ.. အဲဒါနဲ့ အခြေအနေ သိပ်မကောင်းတော့ဘူးလေ.. " ငါတို့ နဲ့ ဆော့ချင် လား.." လို့ မေးတော့ YES ကိုသွား တယ်.. အမှန် ကျွန်မတို့တွေက ကြောက်နေပြီ... NO ကိုသွားစေချင်တာ.. အဲဒါ သုံးခါလောက် မေးတော့ မထူးတော့ဘူး... သူလည်းဆော့ချင်လို့နေမှာပေါ့ ဆိုပြီး မေးချင်တဲ့ မေးခွန်းတွေ ဆက်မေးတယ်... အခု ဒီအခန်းထဲမှာ ဘယ်သူတွေရှိလဲ မေးတော့ GIRL ဆီကိုသွားတယ်.. အဲဒါဆက်မေးတယ်.. ပြီးတော့ ဘယ်နှစ်ယောက်ရှိလဲဆိုတော့ 1 ကိုနှစ်ခါသွားတယ်... အဲဒီအချိန်မှာ စောစောက ကြောက်တဲ့စိတ်တွေ ပျောက်ပြီး ပျော်လာတယ်.. " နောင်နှစ် ဆယ်တန်းတက်ရင် တစ်နှစ်တည်းနဲ့အောင်မှာလား.. ဂုဏ်ထူးတွေ ပါမှာလား.. " အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေလျှောက်မေးတယ်.. နောက် ခဏကြာတော့ ကျွန်မတို့ဆော့နေတဲ့ စားပွဲကို တစ်ယောက်ယောက်က ခေါက်နေတဲ့အသံထွက်လာတယ်.. တစ်ယောက်မျက်နှာတစ်ယောက် ကြည့်ပြီး ဘယ်သူခေါက်တာလဲပေါ့.. ဘယ်သူမှမခေါက်ဘူး လို့ ခေါင်းခါပြကြတယ်. နောက် ခဏကြာတော့ ဘေးနားကနေ လေတွေဝှေ့တိုက်သွားသလိုဖြစ်ပြီး သုံးယောက်စလုံး ဆံပင်တွေပါ လွင့်ကုန်တယ်.. အကုန်လုံးက ကြောက်လန့်နေကြပြီန.. အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မက သတိရပြီး..
" အားလုံး လက်ကို မဖယ်ကြနဲ့နော်.. သူ့ကို ပြန်မပို့ရသေးဘူး.. " လို့ပြောတာကို တစ်ယောက်က လန့်ပြီး တင်ထားတဲ့လက်ကို ဖယ် လိုက်တယ်...ကျန်တဲ့သူတွေလည်း မျက်လုံးတွေပြူးကုန်ကြတာပေါ့.. အဲဒါနဲ့..
" ငါတို့ ဆက်မဆော့တော့ဘူး.. " လို့ ပြောတာကို... No ဆိုတဲ့ စာလုံးနားက ဘယ်မှမရွေ့တော့ဘူး... ကျန်တဲ့သူတွေလည်း ကြောက်ပေမယ့် မအော်ရဲဘူး... မိသွားရင် ရုံခန်းရောက်မှာလေ... အဲဒီအချိန်မှာ ဖိနပ်ကို ရှပ်တိုက်စီးတဲ့အသံတွေ စကြားရတော့တာပဲ.. အဲဒီနောက်မှာ ပြတင်းပေါက် တံခါးတွေက လေမတိုက်ဘဲ တ၀ုန်းဝုန်း ပိတ်ကုန်တာ... မှန်တစ်ချက်တောင် ခွမ် ကနဲ ကွဲသွားသေးတယ်...ကြိတ်ငိုတဲ့ သူကလည်း ငိုကုန်ပြီ.. အဲ့ဒါနဲ့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး နှစ်ယောက်လုံး အဖုံးပေါ်ကနေ လက်ကို ဖယ်လိုက်တာ ပုလင်းအဖုံးက စာရွက်ပေါ်မှာ သူ့ဟာသူ ရွေ့နေတယ်.. အဲဒါနဲ့ ကျွန်မလည်း အဲဒီပုလင်းအဖုံးကို စာသင်ခုံ တွေ ထပ်ပြီးစီ ထားတဲ့ ခုံ အထပ်လိုက်ထပ်ထားတဲ့ဘက်ကို ပစ်လိုက်တယ်... ပြီးတော့ စာရွက်ကိုလည်း လုံးခြေပြီး စုတ်ဖြဲပစ်လိုက်တယ်...အားလုံးတိတ်ဆိတ်သွားတယ်.. အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်မတို့အားလုံးက ကြောက် လန့်ပြီး ဘုရားစာရွတ်မိလိုက်တာ ခုနက ပစ်လိုက်တဲ့ ပုလင်းအဖုံးရောက်သွားတဲ့ နေရာက ခုံ အထပ်လိုက်ကြီးက ဝုန်း ဆိုပြီး တစ်ခုံမကျန် အကုန်ပြုတ်ကျ တာ တစ်ကယ်ဆို ထွက်ပြေးလို့ရနေတာကို ဘယ်သူမှမပြေးမိကြသလို ခြေ ထောက်တွေလည်း မရွေ့ဘူး.. နောက်တစ်ခုထူးဆန်းတာက ဒီလောက်ဆူ ညံပြီး ဖြစ်နေတာကို အခန်းအပြင်က ဘယ်သူမှမကြားကြဘူးလေ.. ဆယ့်တစ်ယောက်လုံး ရသမျှ ဘုရားစာ တွေ အကုန် အော်ရွတ်ကျပေမယ့် ခုနကပြိုကျတယ့် ခုံကိုလည်း လူတွေ ခြေ ထောက်နဲ့ ၀ိုင်းကန်နေသလို အသံတွေထွက်တာလည်း တိတ်မသွားဘူး.. ပြီးတော့ ဘေးနားမှာ လူတွေ ပြေးပြီးဖြတ်သွားသလို လေတွေတ၀ူးဝူးနဲ့... နောက် အခန်းထဲမှာ ထွန်းထားတဲ့ မီးပါပျက် သွားတယ်... ကျွန်မတို့လည်း အားလုံးစု ထိုင် လက်အုပ်ကလေးတွေချီ.. မျက်စိကိုမှိတ်ရင်း (မျက်ရည်တွေနဲ့ပေါ့.. ) ဘုရားစာရွတ်နေ လိုက်ကြတာ.. ဆယ့်ငါးမိနစ်ကျော်လောက်လည်းကြာရော ၀ုန်း ဆို နံရံကိုပစ်ဆောင့်လိုက်တဲ့ အသံကြီးကြားပြီး ပြတင်း ပေါက်တံခါးတွေရော တံခါးမကြီးရော အကုန်ပြန်ပွင့်သွားတယ်.. ခြေ ထောက်လည်း လှုတ်လို့ ရသွား တယ်.. အဲဒါ တံခါးပေါက်ကို အလုအယက် ပြေးထွက်ကြတာ အ ပေါက်ဝလဲရောက်ရော အပေါက်ဝမှာ ယောက်ျားကြီးတစ်ယောက်.. တစ်ကိုယ်လုံးမှာ သွေးတွေနဲ့.. အကျီင်္ က အဖြူရောင်.. အဖြူရောင်ဆိုပေမယ့် သွေးတွေပေကျံနေတော့ အနီဘက်တောင် တော်တော်ရောက်နေပြီ.. ပုဆိုးက အပြာ ရောင်.. သူက အခန်းပေါက်ဝမှာ ရပ်နေတော့ ဒီမှာလည်းဆက်မနေရဲ အပေါက်ဝမှာလည်း တစ်ကောင်ဆိုတော့ ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ဆိုပြီး မျက်လုံးကိုမှိတ်.. သူ့ကိုဝင်တိုက်ပြီး အကုန်ထွက်ပြေး လာ တာ... သူ့ကိုဝင်တိုက်လိုက်တာ လေဟာနယ်ထဲ ခဏလေးရောက်သွားသလိုပဲ... အခန်းက ဒုတိယ ထပ်မှာ ဆိုတော့ အောက်ထပ် ပြေးဆင်းလာကြတာ.. နောက်ကျတဲ့ခြေထောက် သစ္စာဖောက်ပဲ ဆိုပြီး ပြေးဆင်း ကြတာ.. ပြီးတော့ ကိုယ့်အခန်းထဲပြန်ရောက်တော့ အသက်မနည်းရှုပြီး ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေ ကျလို့.. နောက်ရက် ဆယ့်တစ်ယောက်လုံးဖျားကြတာ အကလည်းဆက်မတိုက်နိုင်တော့ဘူးလေ..
ဒီအဖြစ်အပျက်လေးက ကိုးတန်းတုန်းက စူးစမ်းချင်စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့ဖူးတဲ့ အမှားလေးတစ်ခုပါပဲ ရှင်... ကျောင်းနာမည် လေးကိုတော့ ချန်လှပ်ထားခဲ့ပါရစေ..
ဒီဇာတ်လမ်လေးကို ပြောပြပေးပို့သော မ Shweyi Phyo Zaw ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
၀င်ရောက်ဖတ်ရှုအားပေးကြသော ပရိသတ်များကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်......
Credit by Min Ma Naing
တောင်အာဖရိကရောက် မြန်မာတွေ မန်ဒဲလားအတွက် လွမ်းသူပန်းခွေပို့
ကွယ်လွန်သူ တောင်အာဖရိကခေါင်းဆောင်ဟောင်းမန်ဒဲလားအတွက် လွမ်းသူပန်းများ ချ ဂုဏ်ပြုနေကြစဉ်။ (ဒီဇင်ဘာလ ၆၊ ၂၀၁၃)
အခုလို ကွယ်လွန်သွားတဲ့ တောင်အာဖရိက ခေါင်းဆောင် နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလား အတွက် တောင်အာဖရိ ကနိုင်ငံ ကိုရောက်နေတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်း မန်ဒဲလား ကွယ်လွန်တဲ့ ဝမ်းနည်းခြင်း အထိမ်း အမှတ် လွမ်းသူ့ပန်းခွေသွားချပြီး အမှတ်တရ ဂုဏ်ပြုဖို့ စီစဉ်နေကြပါတယ်။ အသားအရောင်ခွဲခြားမှု ဆန့် ကျင်ရေးခေါင်းဆောင် နယ်လဲဆင်မန်ဒဲလားရဲ့ အစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ သမိုင်းကြောင်းတွေကို ဂုဏ်ပြု ဖို့ဖြစ်ပြီး မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လှုပ်ရှားမှုမှာ လည်း နိုဘယ်လ်ငြိ်မ်းချမ်းရေးဆုရှင် နယ်လဲဆင် မန်ဒဲလားရဲ့ နိုင်ငံရေး သြဇာကြီးမား သက်ရောက်မှုတွေ ရှိခဲ့တဲ့အတွက် အခုလိုလွမ်းသူ့ပန်းခွေချပြီး သွားအလေးပြုကြ မှာဖြစ်တယ်လို့ တောင် အာဖရိကနိုင်ငံရောက် မြန်မာ့အရေးလှုပ်ရှားသူ ဒေါက်တာသိန်းဝင်းက
"မန်ဒဲလား ရုပ်အလောင်းရှိတဲ့ စစ်ဆေးရုံကိုသွားဖြစ်မလား မသိဘူးပေါ့။ Johannesburg မှာရှိတဲ့ သူ့အိမ်ကိုသွားဖြစ်မလား။ ဒါမှမဟုတ်ရင် Pretoria က သမ္မတရုံးပေါ့နော် Union Building ကိုသွားဖြစ်မလား မသိဘူး။ ကျနော်တို့သွားဖို့ပါ။ သွားရင်တော့ ကျနော်တို့က မြန်မာပြည် လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ ကိုယ်စားရယ်၊ မြန်မာပြည်သူလူထုရဲ့ကိုယ်စားရယ်၊ နောက်တစ်ခုက ကျနော်တို့ရဲ့ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်စားရယ် သမ္မတ မန်ဒဲလားကို လာရောက်ပြီး ဂါဝရပြုတယ်ဆိုတာလုပ်ဖို့ပါ"
"နယ်ဆင် မန်ဒဲလားရဲ့ ရုပ်အလောင်းဟာ Pretoria မှာရှိတဲ့ စစ်ဆေးရုံကို ရွှေ့လိုက်တယ်လို့ကျနော်ကြားပါတယ်။ ဒါမှာကတော့ Johannesburg ကော Cape Town ရော Bloemfontein ရော ဒီမြို့ကြီးတွေမှာ ဝက်ဝက်ကွဲနေတယ် ပြောရမှာပေါ့နော်။ အားလုံးဟာ အုတ်အော်သောင်းနင်းနဲ့ အကုန်ဖြစ်နေတာပေါ့။ မနေ့က ဆိုလို့ရှိရင် ကျနော်တို့ နယ်ဆင် မန်ဒဲလား ဆုံးတယ်လို့ ကြားကြားချင်း တီဗွီမှာ ကျနော်တို့တွေ့တာ့ သူ့ရဲ့အိမ်ပေါ့နော် Johannesburg မှာရှိတဲ့ သူ့ရဲ့အိမ်မှာ လမ်းမပေါ်မှာ လူထုတွေ အများကြိးရောက်လာတယ်။ နောက်ပြီးတော့ Sikhumbuzo ဆိုတဲ့ လူမဲရပ်ကွက်အကြီးဆုံးပေါ့ ညကတည်းက အခမ်းအနားတွေ လူထုတွေ မန်ဒဲလားနဲ့ပါတ်သက်တဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုကြတယ်။ နောက်ပြီးတော့ တော်လှန်ရေး ကာလက တိုက်ပွဲ သီချင်းတွေဆိုကြတယ်။ ပြီးတော့ဂုဏ်ပြုတာတွေ ကျနော်တို့တွေ့ရတယ်။"
အခုလိုမျိုး အသားရောင်ခွဲခြားမှု ဆန့်ကျင်ရေးခေါင်းဆောင် နယ်ဆင် မန်ဒဲလား ကွယ်လွန်သွားရတဲ့အပေါ်မှာ လူမည်းပြည်သူတွေတင်မကဘဲ လူဖြူတွေကပါ ဝမ်းနည်းကြောင်း အတူတကွ ပြသခဲ့ကြတာမြင် ခဲ့ရတယ်လို့ ဒေါက်တာသိန်းဝင်းက အခုလိုပြောပြပါတယ်။
"ပိုပြီး ကြည်နူးဖို့ကောင်းတာက လူထုက အမဲလူထုပေါ့နော် လူမဲအများစုက လုပ်တဲ့နေရာမှာ လူဖြူတွေအများကြီးက ပါဝင်တာကိုကျနော်တို့တွေ့ရတယ်။ သာမန်လူဖြူတွေဟာလည်း လူမဲတွေနဲ့အတူ သီချင်းဆိုကြတယ်။ ကကြတယ်။ လူဖြူတွေကိုယ်တိုင်က အများကြီးကနေပြီးတော့ အသိအမှတ်ပြုတယ်ပေါ့ဗျာ။ အခု ကွယ်လွန်သွားတဲ့ နယ်ဆင် မန်ဒဲလားကို သူ့ကြောင့်သူတို့ တိုင်းပြည်ဟာ အေးချမ်းသွားရတယ်ပေါ့။ ကျေးဇူးတင်တယ်အကြောင်းဆိုတာလုပ်ကြတယ်။ နောက်တစ်ခါ ဒီ Cape Town မှာလည်း ကျနော်တို့ မြန်မာလူထုသိတဲ့ The Arts Institute မှာ ဒစ်မွန်တူးတူးက ဒီမနက်မှာ ဆုတောင်းပွဲ လုပ်တဲ့အခါကျတော့ မန်ဒဲလား အကြောင်းကိုပြောကြတယ်ပေါ့လေ။ မြို့တိုင်းမှာ နယ်ဆင် မန်ဒဲလားနဲ့ပါတ်သက်လို့ ကိုယ့်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွေကရော တစ်ဦးချင်းကရော ဂုဏ်ပြုကြတာမျိုးတွေ အခုလောလောဆယ်ရှိနေကြပါတယ်ခင်ဗျ"
ဒါကတော့ တောင်အာဖရိကပြည်သူတွေအပါအဝင် သူ့ကိုလေးစားချစ်ခင်ကြတဲ့ လူတော်တော်များများ နောက် တောင်အာဖရိကနိုင်ငံရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားကေပါ နယ်လ်ဆင်မန်ဒဲလားအပေါ် လွမ်းသူ့ပန်းခွေချ အလေးပြုဂုဏ်ပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။